शिव प्रकाश, ( हालः बोस्टन, अमेरिका )
“सुखले कतिबेला दुःखको स्वरुप धारण गर्छ थाह हुदैन !” म यस्तै सोचिरहेको छु । उता मिङ्माले त्यो रुप धारण गरिसकेकी छे । मिङ्मा हिजोसम्म उसको जीवनको सबैभन्दा ठूलो सुख थिई ।
सोझो स्वभावको ग्याल्जेन आज पनि सम्भवत मृत्युगीत गाइरहेछ । आफ्नै मृत्युको त्यो शोकधून सादय अझै उसको मनभरी बजिरहेछ ।
उसले प्राप्त गरेको संसारभरीको खुशी र ऊ भित्रको सम्पूर्ण माया मिङ्मामाथि खन्याइरह्यो तर त्यो सबै बालुवामा पानी भयो ।
“जीवनमा मान्छे दुई पटक मर्दो रहेछ, यो मेरो पहिलो मृत्यु हो । अन्तिम सत्य अघिको सत्य यही हो ।” आफ्नै मृत्यु घोषणा गर्दै ग्याल्जेन भर्खरै बोले जस्तो लागिरहेछ ।
दुःख जीवनको असल साथी हो भने मृत्यु जीवनको अभिन्न साथी हो । जीवनमा सबैले छोड्छन् तर यिनले कहिल्यै छोड्दैनन् । जीवन ननिलेसम्म मृत्यु मान्छेसँगै बाँचिरहेको हुन्छ । ग्याल्जेन आज सिनु भएको छ र उसका यी साथीहरु हरिया झिँगा भएर ओरिपरी घुमिरहेछन् ।
दुःख र मृत्युका हरिया झिँगाहरु ग्याल्जेनको जीवन ओरिपरी घुमे जस्तै मेरो मस्तिष्कमा ग्याल्जेन पुतली बनेर फन्फनी घुमिरहेछ ।
गीताको ज्ञान नभए पनि सार थाह थियो । ग्याल्जेनभित्र छाएको निरासाको अँध्यारोभित्र उत्साहको दीयो बाल्न मैले उसलाई गीताको सार बताएँ ।
सम्झ– “जे भयो राम्रो भयो । जे भइरहेछ राम्रो भइरहेछ । जे हुनेछ राम्रो हुनेछ । तिम्रो के गयो ? जसका लागि तिमी रोइरहेका छौ ! तिमीले के ल्याएक थियौ ? जुन तिमीले गुमायौ ! तिमीले के पैदा गर्यौ? जुन नष्ट भएर गयो ! तिमीले जे लियौ यहीँबाट लियौ । जे दियौ, यहीँ दियौ । आज तिम्रो जे छ, हिजो अरु कसैको थियो । भोलि फेरि कसैको हुनेछ ।
हिउँको हिलोले न्यूयोर्कका सडक अझै पोतिएका छन् । हिउँकै बर्को ओढेर सुतेको हड्सन नदी अझै मुर्दासनमै छ– लम्पासार । हिजोसम्म सेताम्मे पहिरनभित्र घुर्मैलो अनुहार लिएर सुतेको थियो शहर । शहर जस्तै धेरै दिनदेखि ग्याल्जेनको अनुहार पनि अँध्यारिएको थियो ।
सधै ग्याल्जेनलाई देख्दा लाग्थ्यो– न्युयोर्कको विरामी मौसम जस्तै छ ऊ पनि । उसको ओठमा हाँसो हराएको धेरै भै सकेको थियो । अनुहारमा सधै औसीको छायाँ देखिन्थ्यो ।
तर आज एकमदै फरक छ । धेरै दिनदेखि धुम्मिएको आकासलाई विहानीको किरणले चिरेको छ । सर्पले काँचुली फेरे जस्तै शहरले काँचुली फेरेको छ । हिँउको काँचुलीले बेरिएर सुस्ताएको शहर आज स्फूर्त देखिन्छ । मुटु कमाउने स्याँठ पनि मान्छेप्रति आज त्यति निर्दयी छैन ।
आगोको स्पर्शले मैनलाई गाले जस्तै, प्रेमिकाको स्पर्शले प्रेमीलाई पगाले जस्तै घामको स्पर्शले हिउँका थुम्काहरुलाई विहानैदेखि पगाल्न थालेको छ । धेरैदिन पछि चहलपहल निक्कै बढेको छ । आकास सफा छ, घाम झलमल्ल लागेको छ ।
आज उसका ओठमा मुस्कानका फूल र अनुहारमा खुशीका आभा फक्रक्क फक्रेको देखिन्छ । आजको यो पहारिलो घाम उसैको अनुहारबाट झुल्केको जस्तो लाग्दैछ । मानौ उसले जीवनमा पहिलो पटक जीवन्त भएको अनुभव गरिरहेछ ।
ग्याल्जेन एकाएक हँसिलो अनुहार लिएर सामुन्ने आयो । । हातमा मिठाइको प्याकेट छ ।
“आज मेरो जीवनको रुखो खडेरीमा खुशीको वर्षा भए जस्तो लागिरहेछ । मेरो मनको बाँझो पाखामा हरियाली पलाएको छ ।” त्यो हँसिलो अनुहारलाई अझ हँसिलो बनाउँदै भन्यो ।
सधैं चिन्ताको चर्को घामले डढेको उसको अनुहार आज खुशीको झरीले पखालिएर सिनित्त भएको छ– उज्यालो र स्निग्ध ! मनमनै भने–“आहा, कति हँसिलो आज ग्याल्जेन !”
“आज तिम्रो पीडाको आगोलाई खुशीको दमकलले निभाए जस्तो छ नि, ल वधाई छ ग्याल्जेन ।” उसको खुशीको कारण बारे अनुमान गर्न मलाई धेरै गाह्रो भएन ।
भूसको आगो जस्तै सधैं भित्रभित्रै अथाह पीडाको आगोमा सल्किरहेको उसको मनको कुरा मैले बुझे पछि ऊ झन दंगदास भयो ।
“खै काम पनि गर्न मन लाग्दैन । केका लागि गर्नु, कसका लागि गर्नु ?” बारम्बार यही एउटा शुष्क प्रश्नको उत्तर खोजिरहन्थ्यो ऊ । पाँच वर्षदेखि म देख्दैछु उसको अनुहारमा कहिल्यै खुशीका फूल फुलेका थिएनन् । सधैं काँडाका झ्याङ्मात्र उम्रिए जस्तो लाग्थ्यो त्यो मलिन अनुहारमा । मनमा सधैं उदास धून बजिरहे जस्तो ! तर, मिङ्मा भने ऊ जति निरस र निराश थिइन । भित्र के थियो थाह छैन । बाहिर हाँसी–खुशी र चञ्चल नै थिई ।
सरदर आइमाई भन्दा निक्कै सुन्दर देखिन्छे मिङ्मा । टिलपिल भरिएको घैंटो जस्तो जोबनले भरिएको ज्यान ! चटक्क मिलेको जीउडाल । ग्याल्जेनको पीडाको मल्हम थियो उसको सुन्दरता । निक्कै बयान गर्थ्यो ग्याल्जेन मिङ्माको रुपको । प्राय सबैका आँखा तान्थी उसले । औधी प्रेम थियो दुईबीच ।
“लैला–मजनुलाई बाँध्ने प्रेमको धागो भन्दा हाम्रो प्रेमको धागो धेरै बलियो छ ।”मिङ्माप्रतिको प्रेम र विश्वासले ग्याल्जेनको मन–मस्तिष्कलाई छिचोलेको थियो ।
“आखिर कुरा त्यही होला हैन ? तिमीले जे चाहेका थियौ त्यही भयो.. !”
वाक्यको बिटमार्न नपाउदै उसले जवाफ दियो– “तपाइँ पनि साक्षात ज्योतिष नै हो, कसरी था’पाउनु भो ? हुन त मेरो मनको कुरा तपाइँले जति कसले बुझेको होला र ?”मिठाईको प्याकेट मेरो हातमा थमाउँदै मर्करी लाइट जस्तो उज्यालो भएर उभियो मेरो अघि ।
खुशीले मनका दुःखहरु धोएर मन सुकिलो बनाएको छ आज । जीवनको उजाड फूलबारीमा ढकमक्क रंगीचंगी फूलहरु पनि फुलेका छन् ।
एकटकले निक्कैबेर हेरेँ । ऊ मुस्कुराई रह्यो । मेरो सहानुभूतिले उसको दुःखलाई सधैं साथ दिए जस्तै अहिले मेरो मुस्कानले उसको मुस्कानलाई निक्कैबेर साथ दियो ।
कहिले खुशी हुँदा, कहिले दुःखी हुँदा र यदाकदा जिस्किदा ऊ मलाई गुरुदेव भन्छ । उसले गुरुदेव भन्दा म आफूलाई ठूलै गुरु ठान्छु र टुटेफूटेको ज्ञान र थोरबहुत अर्तिबुद्धि पनि दिए जस्तो गर्छु । बेलाबेलामा गीताका एकदुई श्लोक सुनाइ दिन्छु । चाणक्यका एकदुई पङ्ति । बुद्ध र ओसोका एकदुई लाईन ।
मान्छेमा आशा र आशामा विश्वास भरियो भने दुबै खुट्टा नभए पनि मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ तर निराशा भयो भने दुबै खुट्टा भए पनि काम लाग्दैन । हिजोसम्म निराशाले लंगडो बनेको ग्याल्जेनलाई आज आशा र विश्वासका खुट्टाले दौडाइरहेको छ ।
खुशीको कारण मनमनै किटान गरेर सोधेँ– “कति भयो त ?”
“दुई महिना भयो ।”
“पक्कै हो त ?”
“फरकै पर्दैन अब त !”
“ल वधाई छ , मिङ्मालाई पनि भन्दिनु ।”
“ए, भनि हाल्छु नि । मभन्दा पनि ऊ पो खुशी जस्तो लाग्छे ! तर धेरै टेन्सन खेपेँ मैले यसको लागि । बल्ल यो मनमा शान्ति भयो ।”
सुख शत्रुसँग र दुःख विश्वासिलो मित्रुसँग बाड्नु पर्छ भन्ने सल्लाह दिन्थे । ऊ मान्थ्यो र आफ्ना दुःखका सहानुभूतिको साथी मलाई सधैं बनाउथ्यो ।
भोलिपल्ट शनिवार साँझ उसको डेरामा भेट्ने निम्तो दिएर ग्याल्जेन बिदा भयो । उसको खुशीले मलाई पनि कम खुशी बनाएन ! उसको दुःखको कारण र दुःखको तह–सतहका बारेमा म पनि ऊ जत्तिकै परिचित थिएँ । उसले मसँग प्राय सबै कुराहरु भन्ने गर्थ्यो ।
उसका डेरामा अब हप्तै पिच्छे रमाइलो हुन थाल्यो । हप्तामा एकदिन हैन शुक्रबार र शनिबार दुबैदिन बेलुका प्राय जमघट भइ नै रहन्थ्यो । हप्तै पिच्छे प्रायः फरक–फरक अनुहारहरु देखिन्थे । फरक–फरक उमेर र फरक–फरक समुहका फरक–फरक अनुहार ! तर म भने संयुक्त राष्ट्र संघको स्थाइ सदस्य जस्तो थिएँ– सधैंको स्थायी निम्तारु ।
नातागोता, साथीभाइ, साथीभाइका साथीभाइसम्म उसले आफ्नो खुशी बाड्यो, निरन्तर बाडिरह्यो । यो क्रम झण्डै सातआठ महिना चलिरह्यो ।
केही असल कामका लागि एकदुई डलर माग्दा तर्कितर्की हिड्ने नेपाली भद्रभलाद्मी–विद्वानविदुषीहरुको उपस्थिति प्राय बाक्लो हुने गर्थ्यो । “जहाँ नेपाली नर–नारी, त्यहा रक्सी–वियरको भरमारी” यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको थियो ।
लगातारको जमघटमा उसले मलाई धेरै मान्छेसँग परिचय गरायो । 200-101 exam ती मध्ये धेरैसँग म पहिले नै परिचित थिएँ । हाँसिहाँसी भनी दिन्थे– “कसैले कसैको परिचय दिइरहनु पर्दैन । समय आएपछि मान्छेले आफ्नो परिचय आफैं दिन्छ ।
हप्तैपिच्छेको रमाइलो सँगै उसको खुशीको सागरले सगर छोला जस्तो भइरहेको थियो । बतास चल्दा सागरमा उर्लेका एकनासका लहरहरु जस्तै उसको जीवनमा खुशीका लहरहरु उर्लिहरेका थिए । हिजोसम्म सायद संसारका दुःखीहरु मध्ये सबैभन्दा दुःखी उही थियो तर आज संसारका खुशी मान्छे मध्ये सबैभन्दा खुशी पनि उही छ ।
“आहा... दुःख पछिको यो सुख !” मनमनै धन्य भगवान् भन्ठाने । आखिर भगवानसँग रहेछ नि मान्छेलाई दिने खुशी तर कति धेरै दुःख खेपेपछि मात्र दिँदा हरेछन भगवान्ले पनि त्यो खुशी ।
खुशीको त्यो दोहोरीलत्तासँगै शुभकामना र वधाईका आवाजको ओइरो पनि त्यतिकै लागेको थियो । हिमालको काँखमा हुर्केको निश्छल, नम्र र भद्र ग्याल्जेनको अनुहार त्यो हिमाल जस्तै उज्यालो थियो । ग्याल्जेनको खुशीको त्यो उज्योलोको ज्योतिमा मिङ्मा पनि धपक्क बलेकी थिई । vmware vcp-510
लाग्छ– ग्याल्जेनको चीरकालको घाउ विसेक भएको छ । यही संसारमा यति धेरै खुसी र सुख पनि रहेछ भन्ने अनुभूतिको तलाउमा चुर्लुम्म डुबेको छ ग्याल्जेन । सपना साकार भएर जीवन सार्थक भयो भन्ठानेको छ । यो खुसीका लागि ऊ आफ्ना गाउँघरका पाखाभित्ता, उकालीओराली, देउरालीचौतारीका मठमन्दिर, देवी–देउता, कूल देउता, ईश्वर–परमात्मादेखि लिएर शुभचिन्तक इष्ठमित्र सबैलाई मनमनै नमन गरिरहेछ । धन्यवाद भनिरहेछ ।
आखिर मान्छेले जे गर्छ आफ्नु खुशी र सन्तुष्टीका लागि गर्छ । आफ्नो खुशी र सन्तुष्टीका लागि मान्छेले मान्छेको हत्यासम्म पनि गर्छ । तर, उसले त खुशी बाँडेर खुशी मानइरहेछ । ऊ अहिले यसैमा खुशी छ सन्तुष्ट छ ।
उसले के मात्र गरेर यो खुशी पाउन लागि !350-001 dumps
कति देवी–देउता भाकल गर्यो । कति पटक कुल देउताको पूजा गर्न लगायो । कति मठ–मन्दिरमा अक्षेतापाती चढाउन लगायो । कति बोका–कुखुराको बलि चढायो,कतिलाई खुवायो । भएन ! केही भएन ! कहिल्यै भएन !
अमेरिकाबाट अक्षेता र दक्षिणा समेत पठाएर कति लामागुरु, कति घामी–झाँक्रीलाई हेरायो, देखायो । घरमा कति ढ्याङ्ग्रो ठोकायो । कति रक्सीमासुको भोग लगायो । कति ओखतीमूलो खायो । कति तन्त्रमन्त्रका बुटी लगायो । कति गर्दा पनि केही भएन ! हुदै भएन !
कति उपाय गर्यो तर पनि सधैं प्राय ऊ निरुपाय नै रह्यो । प्रत्येक Swarovski Brooches पटक असफलताले ऊ निरस, निरास, उदास र निरपेक्ष हुदै गइरहेको थियो । भित्रभित्रै सधैँ आफ्नै मनको अश्रुपोखरीमा डुबुल्की मार्दै आर्फैभित्र जलेको आफ्नै मनलाई शान्त पार्दै गयो ।
यी सबै कुरा ग्याल्जेनले मलाई बेलाबेलामा बताएको थियो । उसको जीवनको निरासालाई म अनुभूत गर्न सक्थे । मेरो कोमल हृदय उप्रति सधै अँध्योरोमा दीयो जस्तो भएको थियो । अलिकति भए पनि अन्धकारलाई चिर्ने प्रकाश उसले मबाट पाइरहेको थियो ।
एकदिन मैले भने– “हेर ग्याल्जेन यी देवीदेउताप्रतिको हाम्रो बोध, बुझाइ र Swarovski Earrings विश्वासले कतै हामीलाई झन् अबुझ त बनाइरहेको छैन ? देवीदेउता र धामीझाँक्रीप्रतिको अबुझताको शिकार बनेको मान्छेले समाजमा जधन्य अपराध पनि गरेको छ । हाम्रो समाजमा यो एक अभिश्राप जस्तो पनि भएको छ । तिमी यसका पछाडि नलाग कुनै डाक्टरको सल्लाह लेऊ ।”
यो सल्लाह दिएको केही दिनमै ऊ त्यो खुशीको खबर सबैभन्दा Swarovski Necklaces पहिला मलाई नै सुनाउन आएको थियो– हातमा मिठाइ लिएर ।
उसले त्यसदिन भनेको थियो– “हउ, गुरुदेव ! देवीदेउता त छ नि हउ । अनि धामीझाँक्रीले भनेको पनि त पुग्छ नि हउ । जडीबुटीले पनि काम गर्छ नि हउ । इ गरो त । पुगो त । भाकल पनि गरेको थो । जोखाना पनि हेरा’को थो । दवाइमूलो पनि खा’को थो । आखिर काम त गरो नि ।” आज उसले खाट्टी हिमाली शैलीमा बोल्यो ।
मैले “डाक्टरलाई देखायौ न त ?” भनेर सोध्दा उसले “ह्याँको डाक्टरले हाम्रो बिमार काँ’जानेको हुन्छ र हउ” भनेको थियो ।
मेरा मनका दुई खुट्टाले हो र होइनको दुई डुङ्गा टेकेका थिए । बढी भार भने होइन भन्नेमा डुङ्गामा नै थियो तर उसको खुशीको साथी र साक्षी उसकी स्वास्नी मिङ्मा भन्दा म बढी भएको कारणले हँमा हँ गरिदिन्थे । कहिलेकाही हो नै जस्तो पनि लाग्थ्यो ।
समय वित्दै गयो । दिनहरु नजिकिदै आए । उसको खुशीले संसारलाई नै खुशी देख्न थाल्यो । SY0-301 exam
जसरी संसारमा उज्यालो अँध्यारोको द्वैत अस्तित्व छ त्यसरी नै जीवनमा पनि सुख–दुःख, खुशी–पीडा, राम्रो–नराम्रो, असल–खराब, मीठो–तीतो घाम–छाँयाको द्वैत अस्तित्व छ भन्ने सबै विर्सियो । लाग्थो“उसको बुझाइमा जीनव खुशीको अद्वैत साम्राज्य हो ।” जीवनमा दुःख भन्ने नै छैन ।
उसले मलाई पनि जाउँ भन्यो र भोलिपल्ट हामी हस्पिटल जाने भयौ । ग्याल्जेनले मनभरी माया, आँखाभरी सुन्दर सपना, एक हातमा ढकमक्क फुलेको गुलाफको ठूलो बुकी, Swarovski Pendants बुकीका वीचमा मिङ्माको सुन्दर तस्वीर र तस्वीर सँगै एक शुभकामना कार्ड र अर्को हातमा महँगा र मीठा मीठाइको प्याकेट बोकेको थियो ।
हस्पिटल पुग्ने वित्तिकै ग्याल्जेनको खुशीमाथि अर्को खुशी थपियो । नर्सले भनी– “वधाई छ ग्याल्जेन मिङ्माले एक स्वस्थ छोरो जन्माइन । मिङ्मा पनि कण्डिसन राम्रो छ ।”
खुशीमाथि खुशी । खुशीको सीमा रहेन । ग्याल्जेन दौडदै कोठाभित्र छि¥यो तर छिर्न नपाउँदै निस्कियो । म प्रतिक्षाकक्षमा बसिरहेको छु ।
एकाएक उसका आँखा फेवाताल जस्ता टिलपिल भए । निधारबाट पसिनाको बागमती बग्न थाल्यो । अनुहारमा औँसी घोप्टियो। कहिल्यै भूकम्प नआउने न्यूयोर्कको धरतीमा एकाएक महाभूकम्प गए जस्तो भयो । एउटा अकल्पित पीडा र कहाली लाग्दो त्रादसीले छोप्यो उसलाई । छिनमै सुकेको रुख जस्तो भयो ऊ ।
अहिले मेरा सामू ग्याल्जेन हैन उराठलाग्दो एउटा सुकेको रुख ठिङ्ङ उभिए जस्तो लागिरहेछ । मूर्तिवत् छ ऊ । मौन छ तर अनुहार र आँखा बोलिरहेछन् । र,भनिरहेछन्– "मेरो जीवनको नदीले मलाइ नै बगायो । बगर बनयो मलाई । मेरो जीवनको वटवृक्ष मैमाथि ढल्यो र किच्यो मलाई । म उभिएको जमीन भाँसिदै छ ।" जीवनको मेलोमेसो एकछिनमा भताभुङ्ग भयो ।
हतास अनुहार र मतिर एकहोरिएका उसका उदास आँखाले मसँग त्रादस मौनतामै निक्कैबेर बात मारे । मुठी बटारिएका छन् उसका । अनुहारले आगो ओकलीरहेको छ ।
निक्कैबेर पछि उसले मुख खोल्यो– “तपाइँले भनेको ठीक रहेछ, Cisco CCNA 200-120 dumps जति पढे पनि कहिल्यै बुझ्न नसकिने सबैभन्दा अप्ठ्यारो किताब रहेछ मान्छे !”
“आखिर भयो के...?” मभित्रको अत्यासले मलाई पनि हतास बनाउँदै लग्यो । मैले पनि आफूलाई धेरैबेर मौन राख्न सकिन र सोधेँ ।
उसले छोटो जवाफ दियो– “जसले सपाना जन्माएको थियो उसैले त्यसको हत्या गर्यो ।” आफ्नो शरीर आफैंलाई थामी नसक्नु बोझिलो भयो उसलाई । थचक्क बस्यो ।
म दौडेर कोठाभित्र गएँ । मिङ्माका आँखा भित्तातिर तानिएका Cisco 642-902 थिए, कुनै आकृतिमा अल्झिए जस्तो तर आकृति विहिन थियो त्यो भित्तो । उसले मतिर हेर्दै हेरिन तर मैले उतिर निक्कैबेर हेरेँ । त्यो भन्दा धेरैबेरसम्म छेवैमा सुताएको उसको छोरालाई हेरेँ ।
हेर्दा हेर्दै ग्याल्जेनलाई सम्झिएँ– “धन्न ग्याल्जेन तिमीलाई हर्ट एट्याक्ट भएनछ !” हे भगवान्, तेरो लिला भन्ठाने । के थियो, के भयो ?
हेर्दा हेर्दै एकाएक मिङमाको छोराको रुप मेरा सामू एक घनघोर स्वरुपमा परिणत भयो । त्यो सानु बालक एक भयानक पहाड जस्तो भएर उभियो मेरा सामू । ग्याल्जेनलाई कस्तो भयो होला ! मैले अनुमान लाउन सकिन ।
प्रेम घृणामा परिणत भएपछि मान्छे एकाएक पशु बन्न सक्छ । म डराएँ । म अधैर्य जस्तो भएँ तर आफूभित्रको धैर्यताको बाँध फूट्न नदिइ ग्याल्जेनलाई सान्त्वना दिन म बाहिर आएँ ।
विडम्बना, ग्याल्जेन त्यहाँ थिएन ! मेरो झोलासँग एउटा किताब थियो । किताब माथि एउटा सानो चिर्कटोमा लेखेको थियो– “यो संसारमा कसले कसलाई विश्वास गर्ने ? के www.kingdumps.com उसलाई बेबीसिटरमा त्यहाँ पठाएनु नै मेरो गल्ती भयो त ? के मैले आफ्नो चिहान आफैं खनेको हुँ त ?”
उता मिङ्माले जे जति गरी यो सबै ग्याल्जेनको खुशीको लागि गरी । उसलाई पनि आमा हुने इच्छाले भित्रभित्रै पिरोलीरहेको थियो । त्यो भन्दा बढी बाबु हुने ग्याल्जेनको इच्छालाई मिङ्मा मार्न चाहन्नथी ।
मिङ्माको मातृत्वभावले ग्याल्जेनको पिता बन्ने CCIE 350-001 exam आकासिदो इच्छालाई पुरा गर्न यो सब गरायो । मिङ्माले सोचेकी थिई त्यो बच्चा आफू जस्तै हुनेछ र ग्याल्जेनको कमजोरीको रहस्य रहस्यमै रहने छ । तर परिणाम उल्टो भइदियो ।
जसलाई आफ्नो ठानेर आश गरिन्छ त्यसबाट निराशा हुँदाको पीडा र जसमाथि विश्वास गरिन्छ त्यसबाट धात हुँदाको घाउ तेजाबको घाउ भन्दा पनि गहिरो हुन्छ । उसको जीवनमा एकाएक लागेको त्यो गहिरो घाउको खाल्डोमा ऊ आफैं गाडियो । र,त्यहीँभित्र हरायो पृथ्वीको घाउमा सीता हराए जस्तै !
पश्चातापको तावामा जिउँदो माछो भएको ग्याल्जेन अज्ञात छ अहिलेसम्म ।vmware vcp-510 exam मिङ्मा पनि पश्चाताप र अशान्तिको आगोमा जीवन जलाएर बाँचिरहेकी छे ।
कालो न कालो, भैंसीको पाडो जस्तो कालो । Swarovski Figurines लफ्फ्रक्क पेरका ठूल्ठूला ओठ ! भेडाका भुत्ला जस्तो घुङिग्रएको कपाल ! मिङ्माको छोरालाई देख्ता उसको मालिक मेरा आँखामा नाच्न थाल्यो । मिङ्मा कालो जातीको एक मान्छेको घरमा बेबीसिटर काम गर्न थालेको एक वर्ष CompTIA 220-801 dumps भएको थियो ।
प्रेमले बनेको सम्बन्ध जति नै टुटाउन खोजे पनि टुट्दैन । त्यही सम्बन्ध स्वार्थले बनेको छ भने जति नै बचाउन खोजे पनि बच्दैन । म अझै दुविधामा छु– यो प्रेम हो वा स्वार्थ ?
जनवरी ०३, २०१३,।